Kuzoqhubeka ukwakhiwa kwesikole eFrance | News24
Kuzoqhubeka ukwakhiwa kwesikole eFrance
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Isikole samabanga aphezulu UMvuzo eFrance sizoqhubeka nokwakhiwa njengoba indaba yokusweleka kwezimali isilungisiwe.
KUZOQHUBEKA ukwakhiwa kwesikole samabanga aphezulu Umvuzo eFrance, eMpumelelo emva kokuba kume isikhashana ngenxa yezinkinga zokuphela kwezimali zokuqhuba lo bhazabhaza wesikole.
Ukuqhubeka kokwakhiwa kwalesi sikole kuqinisekiswe ikhansela lendawo uMnu Bongani Dlomo othe nakanjani ngenyanga kaZibandlela (December) lesi sikole izondonga zaso zizobe sezimile futhi sesiqediwe ukwakhiwa.
Lesi sikole sakhiwe lapho bekuyinkundla yezemidlalo eFrance. Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwasuka umsindo mayelana nokwakhiwa.
Umphakathi wakule ndawo wawungayizwa kahle eyokwakhiwa kwesikole kule nkundla, unemibuzo yokuthi uma kwakhiwa isikole ezemidlalo zizodlalelwaphi njengoba inkundla iyodwa kule ndawo.
Emva komdonsiswano isikole sigcine siqaliwe ukukwakhiwa kanti futhi uDlomo uthe uthole okukhulu ukwesekwa umphakathi mayelana nale ntuthuko yesakhiwo sesikole uma usubona sesiqaliwe ukwakhiwa ngonyaka odlule.
“Kube nomkhulu umsindo ngesikhathi kuhlongozwa ukwakhiwa kwaso.
“Amanye amalungu omphakathi alwa eyokuthi uma kwakhiwa isikole ezemidlalo zona ngabe zizodlalelwa .
“Bekunesidingo esikhulu sokwakhiwa kwesikole njengoba isikole samabanga aphezulu lapho kufunda khona izingane singekho esimeni esigculisayo.
“Ukwakhiwa kwalesi sikole kuzoshintsha izimpilo zabazali bezingane okuyizona ezifunda kwisikole Umvuzo kuphinde kusizakale nabo abafundi besikole Umvuzo,” kusho uDlomo.
Uthe kuke kwaba nesimo sokushoda kwezimali esibuye senza ukuthi uhlelo lokwakhiwa kwesikole lume kodwa,.
UDlomo uthe sekuqinisekisiwe ukuthi lo luhlelo lokwakhiwa kwesikole luzoqhubeka kuyo le nyanga uMbasa (April) noma ngoNhlangulana (June).
“Engingakusho ukuthi isikole sikhulu kakhulu noma ngingeke ngaba nesiqiniseko sokuthi amagumbi okufundela mangaki kodwa wona anele bonke abantwana.
Okuzokwenzeka ukuthi kuyothi nje uma siqedwa bese abafundi besuka bezofunda esikoleni esisha esiyobe sesiphelile,” kubeka uDlomo